I-syndrome engavamile yatholakala kuwo wonke amalungu omndeni wase-Italy futhi yaqanjwa ngegama labo - Indlela yokuphila 2022
I-syndrome engavamile yatholakala kuwo wonke amalungu omndeni wase-Italy futhi yaqanjwa ngegama labo
Amalungu egazi angu-6 omndeni wakwaMarsilla aduma emhlabeni wonke futhi wamangala ososayensi, futhi ngenxa ye-syndrome engavamile.
UMaria Domenica oneminyaka engu-78 namadodakazi akhe amabili uLetizia noMaria, kanye nezingane zabo - uVirginia, uLudovico noBernardo baduma emhlabeni wonke ngenxa yobuhlungu obukhulu. Kuvela ukuthi wonke amalungu alo mndeni omangalisayo awezwa ubuhlungu.
Abazi ukuthi kusho ukuthini ukuzishisa noma ukushaywa. Ngizothini! Amanye amalungu omndeni aze aphuka amathambo futhi bathola lokho kuphela lapho beqala ukukhula ndawonye.
Ngamakhono anjalo amangalisayo emsebenzini, u-Letizia waze waqanjwa ngokuthi "uwesifazane ophakeme" ozakwabo. Wake waphumula ebusika futhi waphihlika iqakala, kodwa akazange abone inkinga futhi waqhubeka kanje amanye amasonto angu-2 eholidini. Futhi indodana yakhe uBernardo wake wawa ebhayisikilini futhi waphuka ingalo, kodwa akazange akubone.
Sizwa ubuhlungu, kodwa buhlala imizuzwana embalwa, - kuvuma uLaetitia.
Into enjalo engavamile, yebo, ososayensi abanentshisekelo. Ngemva kokwenza ucwaningo lwabo, bathola ukuguqulwa okungavamile kwezakhi zofuzo ze-ZFHX2, ngenxa yokuthi isimiso sezinzwa zawo wonke amalungu alo mndeni ekugcineni sisabela kuma-receptors ezinhlungu ngendlela ehluke ngokuphelele kunabantu abavamile.
Uma singakwazi ukuthola isizathu sokungabikho kobuhlungu, khona-ke mhlawumbe sizoba nenhlanhla ngokushesha ukudala isizukulwane esisha esiphumelelayo sokuqeda ubuhlungu.
Phakathi naleso sikhathi, ososayensi bamane banikeze igama lesi sifo esingavamile, beyibiza ngokuthi isibongo somndeni wase-Italy - i-Marsiglia syndrome.
Ukunakekelwa kwesikhumba ekwindla: okudingeka ukwazi futhi ushintshe
Ikwindla eyasihlaba umxhwele iyinkathi ekahle yezinguquko eziningi ekuphileni: ungazama izindlela zokwelapha ezintsha zobuso nomzimba wakho, ulinge izinwele zakho zezinwele futhi uzivumele okwengeziwe kukho konke. Ingcweti Yabelana Amathiphu Okunakekelwa Kwesikhumba Aqinisekisiwe Wokuwa
Ubufakazi obu-5 bokuthi isinkwa se-ginger sinempilo futhi simnandi
Uma usacabanga ukuthi yini ongayipheka ngoNyaka Omusha, qaphela isinkwa se-ginger, esizonikeza ukunambitheka kweholide futhi kuzuze umzimba
Ukuze uthole umsebenzi hhayi kuphela: indlela yokufunda ukukhuluma kahle futhi kahle
Isichazamazwi esilungile sizokunikeza ukuzethemba futhi sikuvumele ukuthi uxazulule kalula noma yiziphi izinkinga. Usokhaya u-Irina Ermak wabelane ngama-hacks empilo yakhe kanye nokuzivocavoca okukhethekile kokuthi ungafunda kanjani ukukhuluma kahle futhi kahle
Ama-Chunky sneakers: indlela yokugqoka lo mkhuba futhi ubukeke njengabesifazane entwasahlobo
Amateku amakhulu agqamile noma amhlophe qhwa anezingqi eziwugqinsi ayithrendi kusukela kuma-1990s. Njengezinye izinto eziningi zangaleso sikhathi, zibizwa ngokuthi zimbi (zimbi), ezingavimbeli ukuba zibe izicathulo ezifashini kakhulu zeminyaka emibili edlule
Ungasithola kanjani isisusa sokwehlisa isisindo: izindlela ezizofanela wonke amantombazane
Ukuze ulahlekelwe isisindo ngokuphumelelayo, kufanelekile ukuthola isisusa sokulahlekelwa isisindo ekuqaleni kohambo. Indlela yokwenza - funda kundaba yethu. Futhi yebo, amathiphu ethu azohambisana nayo yonke intombazane